विराटनगर, १२ माघ । मोरङको रतुवामाई नगरपालिकामा सत्तारुढ दल नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) को भातृसंगठन युवा संघ नगर कमिटी गठन भएको छ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले नेतृत्व गरेको संस्थापन पक्षीय नेकपाको युवा संगठन राष्ट्रिय युवा संघ नेपाल रतुवामाई कमिटी गठन भएको हो ।
सोमबार रतुवामाई–७ स्थित विश्वनाथ मन्दिरको सभाहलमा नगरका १० वटै वटाबाट हजारौँ युवाहरुको सहभागितामा आयोजित बृहत भेलाले राम कार्कीको अध्यक्षतामा १ सय ७५ सदस्यीय रतुवामाई नगर कमिटी गठन भएको हो । नगर कमिटीको सह–संयोजकमा अमन सिंह, राजेश राई, पर्शुराम बस्नेत, जिवन न्यौपाने, सचिवमा समिर सुवेदी, सहसचिवमा एसफ मियाँ, सागर पौडल, सन्दीप गौतम र कोषध्यक्षमा सविता नेपाल चयन भएका छन् । त्यसैगरी सदस्यहरुमा नगरका १० वटै वडाबाट समानरुपले प्रतिनिधित्व हुनेगरी १ सय ६५ जना सदस्य चयन गरिएको छ ।
सो अवसरमा कार्यक्रमका प्रमुख अतिथि नेकपा केन्द्रीय सदस्य तथा विद्यार्थी फाँट इन्जार्ज विनोद ढकालले छिन्नभिन्न भएको कम्युनिस्ट पार्टीलाई एकिकृत गर्दै नेपाली राजनीतिक आन्दोलनको मूल प्रवाहको रुपमा कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई स्थापित गर्न युवाहरुनै अग्रसर हुनुपर्नेमा जोड दिए । ‘पार्टीको एक तहको नेतृत्व आफ्नो पार्टी छाडेर नयाँ पार्टी निमार्णको अभियानमा लागिरहेको छ । जसको नेतृत्व पुष्पकमल दाहाल (प्रचण्ड), माधबकुमार नेपाल र झलनाथ खनालले गरिरहनु भएको छ ।’ उनले भने,‘पद मात्र प्राप्त गर्ने गलत उदेश्य बोकेर आएकाहरु असफल भएपछि विभाजनको पक्षमा लागेका हुन् । त्यसमा हाम्रा केही नेताहरु पनि सति गए । विभाजनको पक्षमा लाग्नेलाई पराजित गर्न युवा शक्तिहरु एक जुट हुन जरुरी छ ।’
नेता ढकालले दोस्रो वरियताका अध्यक्ष प्रचण्डले पहिलो वरियताका अध्यक्षलाई लगाएको १९ बुँदे आरोपपत्रले पार्टीमा असहज परिस्थीति निम्तीएको बताउँदै प्रधानमन्त्री ओलीले अन्तिम समय सम्म एकता जोगाउन प्रयत्न गरेपनि प्रचण्ड–नेपालले पद नभई नहुने अडान लिएर आफै चोइटिएर गएको बताए । ‘प्रधानमन्त्रीले एउटै कक्षा म दोहर्याउँदिन पटक पटक भन्नुभयो । नेतृत्व चाहिने भए विधिमा गएर नेतृत्व हस्तान्तरण गर्न तयार छु भनिरहनुभयो, तर उहाँहरुमा जसरी पनि पद प्राप्त गर्ने भुत सवार थियो ।’ उनले भने,‘विदेशी शक्तिको इसारामा उहाँहरुले पार्टी विभाजन गरि छाड्ने कसमनै खानुभयो र अन्तमा त्यहि गर्नुभयो ।’
उनले प्रचण्ड–माधव पार्टी विभाजनको पक्षमा लागेको आरोप लगाए । ‘पार्टीका पहिलो अध्यक्षले नेतृत्व गरेको नेकपाले अहिलेसम्म कसैलाई हटाएको छैन । सवै यथावतनै हुनुहुन्छ । प्रचण्ड–माधव नेपालहरु पार्टी कमिटीको बैठक छाडेर सडकबाटै पहिलो अध्यक्ष र महासचिवलाई कारवाही गरेको घोषणा गर्दै हिँड्नु भएको छ ।’ उनले भने,‘यसबाट एकताको पक्षमा को छ र पार्टी विभाजन गरेको कसले हो भन्ने प्रष्ट हुन्छ ।’
कार्यक्रममा नेकपा केन्द्रीय सदस्य, मोरङ अध्यक्ष तथा संविधानसभा सदस्य ऋषिकेश पोखरेलले प्रधानमन्त्री ओलीले नेतृत्व गरेको नेकपा नै आधिकारिक भएको र त्यसलाई निर्वाचन आयोगको निर्णयले समेत पुष्टि गरेको बताए । उनले पार्टीका प्रथम अध्यक्ष ओलीले स्थिरताको कुरा गरेको तर प्रचण्ड–माधव समूहले मुलुकमा अस्थिरताको अवस्था सृजना गर्न खोजेको दावी गरे ।
नेता पोखरेलले जनताले मुलुकमा विकास र समृद्धिका लागि ओलीलाईनै साथ दिने स्पष्ट पारे । उनले दशकौँदेखि कुनै पनि सरकारले गर्न नसकेको र ओलीले नेतृत्व गरेको नेकपाको सरकारले ऐतिहाँसिक काम गरेर देखाएकाले पनि जनताले ओलीलाई साथ दिने बताए ।
पोखरेलले जनताले विश्वास गरेर पठाएको प्रधानमन्त्रीलाई पदकै लागि आफ्नै पार्टीका केही नेताको चौतर्फी घेराबन्दी गरेर काम गर्न नदिएपछि बाध्य भएर संसद विघटन गरेको बताए । ‘हामीले संविधान कार्यान्वयन, विकास र समृद्धिका लागि जनतासँग भोट मागेका थियौँ । त्यहि अनुसार जनताले भोट दिएर जिताए ।
तर दुई तिन जना नेताले जसरी पनि पद पाउनुपर्ने हठका कारण प्रधानमन्त्रीलाई काम गर्न दिनुभएन । चौतर्फी घेराबन्दी गर्नुभयो । त्यसैले जनताबाट प्राप्त म्याण्डेड प्रधानमन्त्रीले जनतामै सुम्पिनुभयो ।’ उनले भने,‘सवै भन्दा ठुलो अदालत जनता भएकाले जनतासँग ताजा जनादेशमा जाने निर्णय प्रधानमन्त्रीले लिनुभयो । जनतासँग फैसला माग्नु कसरी गलत हो ? लोकतन्त्रको गहना भनेकै निर्वाचन हो । संविधान बनाउने मध्येको म पनि एक हो । निर्वाचनमा जाने निर्णय कसरी प्रगितामी हुन्छ ? अहिले सवैभन्दा बढी जो संविधान बनाउने प्रकृयामा सहभागिनै थिएन उसैले संविधान मिचियो भन्दै सडकमा कुतर्क गरेर हिँडेको देखियो ।’
कार्यक्रममा नेकपा मोरङका स्कुल विभाग प्रमुख रुपेश खतिवडा, राष्ट्रिय युवा संघका पूर्व उपाध्यक्ष नेकपाका युवा नेता पर्शुराम बस्नेत, रतुवामाई नगरपालिकाकी उपमेयर दयन्तादेखि चुडाल, नेकपा मोरङका सदस्य तथा रतुवामाई–८ का वडाध्यक्ष गोपि चापागाईँ, अनेरास्ववियु केन्द्रीय कार्यलय सदस्य भाष्कर खनाल, युवा संघका केन्द्रीय सदस्य विजय डाँगी, केन्द्रीय सदस्य रविन थापा, मुकेश बुढाथोकी, पुराना बामपन्थि नेता लव प्रधान, युवा संघ मोरङका संयोजक नवीन पौडेल, लगायतका नेताहरूले सम्बोधन गरेका थिए ।
कार्यक्रममा राष्ट्रिय युवा संघ रतुवामाईका संयोजक राम कार्कीले नगरक्षेत्रमा व्याप्त भ्रष्टाचार, विकृति विसंगतीका विरुद्धमा युवा संघ उभिने प्रतिवद्धता जनाए । उनले मुलकको विकास र समृद्धि ओली नेतृत्वको नेकपाबाट मात्र सम्भव भएकाले सवै युवाहरु युवा संघमा आवद्ध भएर विभाजनकारीहरुलाई परास्त गर्ने बताए । उनले अब युवा संघ वडा तथा टोल टोलमा विस्तार गरिँदै लगिने समेत बताए ।
बृहत भेला अघि युवा संघले नगरका विभिन्न भागबाट मोटरसाइक र्याली समेत निकालेको थियो । केहीदिन अघि मात्र प्रचण्ड–नेपाल पक्षले आफ्नो पक्षको युवा भेला गरेको थियो । सो भेलामा कार्यकर्ताको न्युन सहभागिता भएपछि प्रचण्ड–नेपाल पक्षका नेता निरास भएर फर्किएका थिए ।
स्थानीय कार्यकर्ता नपाएपछि प्रचण्ड–नेपाल पक्षको सो भेलाले उर्लाबारीका युवा निलम खड्कालाई बोलाएर आफुनो पक्षको युवा संघ रतुवामाई संयोजक भन्दै टिका लगाएर घोषणा गरेको थियो ।